के कस्ता लाभहरु प्राप्त हुन्छ? – DharmaSun
के कस्ता लाभहरु प्राप्त हुन्छ?
सहिरुपमा प्रमाणित भएको बौद्धधर्मको उपदेशहरुबाट अध्ययन, चिन्तन तथा ध्यानभावना गर्न सक्ने एउटै मार्गबाट ज्ञान पाउनु भनेको अति नै दुर्लभ बिषय हो । आर्यताराको त्रि उत्तमले हामीहरुलाई तहगत रुपमा समग्र बौद्धमार्गको ज्ञान लिन सक्ने अमूल्य अवसर प्रदान गर्दछ ।
हाम्रो जीवनमा कसरी आर्य तारा त्रि-उत्तममा रहेका उपदेशहरूलाई व्यवहारिक रूपमा लागु गर्न सकिन्छ?
आर्य तारा त्रि-उत्तममा रहेका सबै विषयवस्तुहरूलाई व्यवहारिक रूपमा तयार गरिएको छ । यसको उद्देश्य भनेको नै बुद्धधर्मलाई हाम्रो दैनिक जीवनमा समाहित र एकीकृत गरेर जीवन रूपान्तरण गरी सुधार गर्ने हो । हाम्रो चित्त सोधनको लागि अध्ययन, चिन्तन र ध्यानभावना निकै नै महत्त्वपूर्ण छन् ।
दिगो रूपमा परिवर्तन गर्नको लागि आर्य तारा त्रि-उत्तममा रहेको तीन महत्त्वपूर्ण क्रियाकलापहरूलाई सहजरुपमा एक आपसमा तालमेल गरिएको छ ।
हाम्रो व्यस्त मनलाई वशमा ल्याउन, जीवन रूपान्तरण गर्नको लागि ध्यान भावना निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर यो सुरुवात मात्र हो । विभिन्न किसिमका दैनिक प्रयासको संयोजनले तपाईँले ध्यान भावना अभ्यासबाट शान्ति, दया र स्पष्टताको फलहरू चाँडै नै प्राप्त गर्नुहुने तरिकाहरू विकास गर्नुपर्दछ । जसले गर्दा हाम्रो जीवनमा चुनौतीहरू र वाधाहरू आउने बेला सजिलै काम लिन सकियोस् । यसमा यस्तो किसिमको अध्ययन, चिन्तन र ध्यानभावनाहरु समाहित गरिएको छ कि हामीहरूले जीवन रूपान्तरणकारी नतिजाहरू हासिल गर्न सक्छौं । अति तनाव र चापले अनावश्यक रूपमा हामीलाई घेरिएको अवस्थामा छोटो समय देखि लामो समयसम्म सौहार्दता, दया र स्पष्टता हुने तर्फ हामीहरू कसरी अगाडी बढ्न सकिन्छ भन्ने कुरा यही नै हो । आर्य तारा त्रि-उत्तम अभ्यासले तपाईँलाई आँधीबेरी आएको अवस्थामा पनि शान्त हुन बन्न सक्नु हुनेछ र तपाईँको वरिपरि जे जस्तो अवस्था रहे पनि समस्या समाधान गर्न सक्नुहुनेछ ।
समग्र रुपमा दिइएको असल मार्ग निर्देशन र तपाईंको दैनिक प्रयासको संयोजनले, तपाईंले चाँडै ध्यान अभ्यासको फल प्राप्त गर्न सक्नु हुनेछ। ती फलहरु भनेका शान्ति, दया, र स्पष्टता हुन् । जसरी एउटा स्याउको बिउबाट मात्र स्याउको रुख उम्रिन सक्छ त्यसै गरी निस्वार्थ माया र दया भएको चित्तको शोधन र मनको ज्ञान पनि सकारात्मक गुणहरू भएको बिउबाट मात्र उम्रन सक्दछ, जुन अभ्यासबाट हामीहरूले छरिसकेका छौँ ।
यस अभ्यासको अवधिभरिमा हामीहरूले आफैलाई बुझ्ने चुनौतीहरूको अनुभव गर्नेछौँ । बुझ्नुहोस् कि यो आफ्नो परीक्षण गर्ने काम सजिलो चाहिँ पक्कै होइन । तैपनि तपाईले आफ्नो पुरानो दुःखदायी बानीहरूको बोझबाट उन्मुक्ति पाएर आनन्दित भएको महसुस गर्नुहुनेछ । जब हामीहरूले आफूले सञ्चय गरिराखेको आशक्ति रूपी बोझ निकाली दिन्छौ, हामीहरू मैत्री करुणा र प्रज्ञाको एउटा सकारात्मक बाटोतर्फ हिड्नेछौं जसबाट हामी हाम्रै मौलिक प्रकृतिको निर्माण गर्दछोैँ ।